Ompompi Bendawo Yekhishi - Ukukhetha Enhle - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Ompompi Bendawo Yekhishi - Ukukhetha Omuhle
2021 / 09 / 24 UkwahlukanisaBlog 2327 0
Kulesi sikhathi samanje, ompompi basekhishini akufanele besaba yingxenye ebalulekile ebalulekile yekhishi lomuntu. Ngobukhulu obuningi, ubujamo, ukuqeda, nokwakhiwa emakethe, usinki empeleni uyisici sokusetha nokubeka izinwele ekhishini lakho. Noma ngabe ikhishi lakho liza ne-rustic design ye-ultra-modern noma yakudala, impela kukhona ompompi ozolingana nomoya ofisa ukuwudala lapho ulungiselela khona ukudla kwakho futhi usebenzise isikhathi sekhwalithi namalungu omndeni.
Kuhle kakhulu, okokuqala, udinga ukukhetha ompompi ofana nezixhumanisi zesinki sakho sasekhishini. Ngemuva kwalokho, kuzodingeka uhlole ukuze ubone inani lezimbobo ezikhuphukayo ku-countertop yakho, noma ubhubhise lapho. Qiniseka ukuthi ukhetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu okuzoba lula ukusisebenzisela ukukhipha uxhumano lwamanzi, bese ukhetha eyodwa elingana nosayizi ofanele welungu lomndeni kusinki sakho wasekhishini.
Uzothola izinhlobo eziningi zompompi emakethe. Noma ngabe ukhetha ukukhetha insimbi noma okucwebezelayo, ithusi, insimbi engagqwali, noma insimbi engagqwali, kufanele uqiniseke ukuthi umzimba ompompi kufanele uqine kakhulu emaphepheni aphezulu asekhishini, okulula ukuwunakekela, osindayo, akufanele ungcoliswe noma ikhanyiswe kalula, futhi kufanele ilingane kahle netimu yakho yasekhishini.
Udinga ukwazi ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ekhishini esenziwe ngezinsimbi kuyaziwa ukuthi simelana kakhulu nemiphumela emibi futhi ompompi abenziwe ngensimbi engagqwali baziwa ngokungabizi kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukuthi uphikelele ekuthengeni ubuso obuhlala isikhathi eside - umpompi owukhethayo kufanele uhlale isikhathi eside ungaconsi phansi futhi ungawuthandi nje uma ubona lowo msindo oconsayo? Vele wenze umzamo wokukhetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisezingeni elihle futhi esilingana nesabelomali sakho sezezimali.
Udinga futhi ukwazi ukuthi isiphundu nesibambo nakho kunquma isitayela sompompi - kukhona nezibambo ezingashadile nezimbili. Amasinki aqukethe ukwelashwa okukodwa alula kakhulu uma ufuna ukulawula izinga lokushisa nezinga lamanzi akho okuphuza. Umpompi olawulwa kabili ukuvumela ukuba unyakaze futhi ulawule izinga lokushisa kwamanzi ngokunembile ngoba inezilawuli ezihlukene, enye yamanzi ashisayo kanti enye ngamanzi abandayo. Kucatshangwa ukuthi umbhobho ompompi ophindwe kabili unesitayela kakhulu kunompompi owodwa wepayipi ekhishini. Kunezinhlobo ezintathu zezitayela ze-spout ongazithenga.
Vele uhlele ukuthi uvame ukusebenzisa ini ompompi bese uyaqhubeka uyithenge ngokuya ngezidingo zakho. Ungathenga ngisho nompompi oboshelwe odongeni ongadingi umgodi wepatio ongaphandle.
Uma ungeyena uhlobo lomuntu ofuna ukuyothenga ezitolo, vele ungene ku-inthanethi bese uthola ithani lezitolo zehadiwe eziku-inthanethi ezinikezela ngamadili amahle kakhulu ompompi.
Izisekelo Zompompi Bekhishi
Kusuka kuJustin Sivan
Ikhishi ngalinye lidinga ompompi. Uma kukhulunywa ngokukhetha lokhu okuyisisekelo, isitayela sesibili. Sonke sifuna ukukhetha ompompi ongasinda ezimeni ezinzima kakhulu, kufaka phakathi izinkulungwane zemijikelezo yokuvula / ukuvala ngonyaka kanye nokwakhiwa kwamaminerali anzima, futhi sisanikezela ngezinsizakalo ezingenasici unyaka nonyaka.
Lo mbhalo unikeza izimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo mayelana nokukhethwa kompompi. Ngokulandela iseluleko esinikezwe lapha, ngeke wazi kuphela ukuthi ungayikhetha kanjani ompompi abafanele, kepha nokuthi uzokuzuza kanjani ngokugcwele. Futhi, kusukela ekukhetheni uhlobo kuze kube sekugcineni, kunezinto eziningi okufanele uzicabangele lapho ukhetha umpompi wakho olandelayo wasekhishini.
Yazi ama-valve akho.
I-valve yingxenye yompompi olawula ukuhamba kwamanzi. Kunezinhlobo ezine ongakhetha kuzo: ama-valves ebhola, ama-valve we-spool, ama-valve wokuminyanisa, nama-disc e-ceramic. Ake sibheke uhlobo ngalunye bese sithola umbono ojwayelekile wokuthi zisebenza kanjani. Uhlobo ngalunye lwompompi lune-valve yangaphakathi elawula ukuhamba kwamanzi nge-spout. Izinga le-valve, noma elinalo i-gasket, linquma ukuthembeka nokuqina kompompi.
I-valve ye-Ceramic disc.
I-ceramic disc valve, ekhonjwa yisigaxa sayo esisodwa emzimbeni obanzi oyindilinga, ingukuthuthuka kwakamuva kubuchwepheshe besimanje bompompi. Lolu hlobo luqukethe ama-disc amabili e-ceramic: i-disc eyodwa imile, kanti enye izohamba ngokumelene nayo ngesenzo sokugunda, ukuvimba amanzi noma ukuvumela ukuba kudlule. Njengoba ama-disc acishe acabalele, uphawu alunanzi manzi. Yize kubiza kakhulu, lena yi-valve ethembeke kakhulu futhi ayithambekele kakhulu ekuphukeni kunezinye izinhlobo.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Ball.
Okuvame kakhulu osinkini basekhishini, ompompi bebhola yilona luhlobo lokuqala lwompompi ongasebenzisi lutho. Insimbi ejikelezayo noma ibhola lepulasitiki lisetshenziselwa ukulawula ukugeleza kwamanzi, futhi zingabonakala ngesibambo esisodwa esihamba phezu kwekhava eliyindilinga elime njengebhola ngenhla kwesisekelo sompompi ompompi. Amabhola epulasitiki ekugcineni aguga, kepha amabhola ensimbi aklanyelwe ukuhlala isikhathi eside.
Igobolondo le-valve ompompi.
Oompompi beCartridge banensimbi engenalutho noma igobolondo lepulasitiki eligxiviza umzimba we-spout noma ompompi. Ngokuya ngokuthi uchungechunge lwezimbobo ku-cartridge luhambisana kanjani nesiqu, amanzi axubekile futhi alawulwa. Le mipompi ithembekile kakhulu, ikakhulukazi uma ifakwe igobolondo lethusi.
Ukucindezela ompompi be-valve.
Ukucindezela kufana kakhulu nompompi wakho oyisisekelo we-washer ngoba usebenza ngokuvula nokuvala ukudlula kwamanzi ngokukhuphuka nokuwa kwesiqu, okudinga ukuthi uqinise (cindezela) i-washer ukuvala ukugeleza kwamanzi. Lawa ashibhile, kepha athambekele kakhulu ekuvuzeni.
Noma iyiphi into engagcina amanzi ingasetshenziswa ukwenza ompompi. Imvamisa, ompompi benziwa ngezinsimbi ezonakalisayo: ithusi, ithusi, ithusi, insimbi engagqwali nama-zinc alloys.
I-die-cast zinc alloy
Oompompi abanomzimba we-die-cast zinc alloy babiza kancane. Kodwa-ke, ayiqinile njengethusi futhi ayiphili ezindaweni ezinzima ezonakalisayo zompompi njengobhedu noma insimbi engagqwali. Akunconywa uma ucubungula ukuthengwa kompompi.
I-Brass iyona ndlela enconyelwa kakhulu ngenxa yobulukhuni bayo kanye namandla okusingatha amazinga okushisa adlulele. Kodwa-ke, ompompi bethusi, abakhiwe ngethusi, i-zinc nomthofu, bangakwazi ukulandela inani lomthofu emanzini okuphuza, kube yingozi empilweni. Ukuze kuncishiswe le ngozi, umthetho ophephile wamanzi okuphuza udinga abenzi bepayipi ukuthi bangasebenzisi ukuhola okungaphezu kwamaphesenti ayisishiyagalombili emaphepheni ethusi. Abakhi bacwaninga ubuchwepheshe bokuqhubeka banciphise inani lomthofu ngethusi.
Insimbi ayiqukethe ukuhola, okuyinzuzo enkulu esimweni sanamuhla sokulawula. Esikhundleni salokho, insimbi engagqwali ingxubevange yensimbi equkethe okungenani i-10.5% ye-chromium. Kodwa-ke, insimbi engagqwali esetshenziselwa ompompi imvamisa iba insimbi engagqwali engu-304, eyaziwa nangokuthi insimbi engagqwali engu-18/8 ngenxa yokwakheka kwayo okungu-18% we-chromium no-8% nickel. I-Nickel inika insimbi isakhiwo sayo esikhethekile samakristalu, esandisa amandla nokuqina kwayo.
Uma uthanda ikhishi lakho libukeka ngendlela efanayo, hlela umbala nokuqedwa kompompi wakho nezinye izinto zokwenza izinto nezesekeli. I-bronze, i-chrome ne-nickel / insimbi engagqwali iyatholakala kuzo zonke izindawo zamanani. Izinketho ezibalulekile zifaka phakathi.
I-Chrome - Iyaqina, ayibizi, futhi kulula ukuyigcina. I-chrome epholishiwe inikeza ukubukeka okucwebezelayo, okucwebezelayo okulungele kahle amakhishi anamuhla. Ungathola futhi ukuqedwa kwe-chrome okuthambile, okufana ne-matte noma ibhulashi, okungahamba nezitayela eziningi zasekhishini.
I-Nickel - Iyakwazi ukumelana nokuklwebheka nokulimala kwamanzi. Ibuye inikeze ukubukeka okuthambile ngokwengeziwe, okuthambile. Imvamisa kuyisiphetho esibiza kakhulu kune-chrome futhi isebenza kahle emakhishini wesitayela sesikhashana.
I-Titanium - I-Super minimalist, enikela ngesitokisi esibushelelezi nangendlela ephezulu ye-titanium.
Ubumba - I-porcelain ingangeza ukuthinta kwesigaba.
Edlule :: Izingxenye Zompompi Wekhishi Nezinto Zokusebenza Olandelayo: Yenza Ikhishi Lakho Lihlakaniphe Ngompompi Bekhishi
2021 / 09 / 28 2289
2021 / 09 / 27 2229
2021 / 09 / 25 2351
2021 / 09 / 25 4231
2021 / 09 / 24 2426
Izingxenye Zompompi Wekhishi Nezinto Zokusebenza
2021 / 09 / 24 1447